Thl W100: समीक्षा, विनिर्देशों, निर्देशन, समीक्षा
मोबाइल बजार मा वर्तमान निर्माताहरु को एक विशाल संख्या, लामो विशाल, किफायती वस्तु स्मार्ट फोन गरेको। यो, बारी मा, मोबाइल फोन साँच्चै सस्तो र लगभग सार्वभौमिक (आफ्नो कार्य को मामला मा) भएका छन् भन्ने तथ्यलाई गर्न नेतृत्व, कम मूल्य बावजुद। बस यी उपकरणहरू को यस लेखमा छलफल गरिनेछ। पूरा मोबाइल फोन Thl W100। विशेषताहरु, प्राविधिक क्षमता र मोडेल को समीक्षा - यो सबै यस लेखमा पढ्न सकिन्छ।
सायद तपाईं पनि Thl जस्ता निर्माताहरु को सुनेका छैनन्। यो पनि एक कम्पनी सिकेर अझै पनि थियो कि हुन सक्छ, तर यो मोबाइल उपकरणहरू निर्माण गर्ने चिनियाँ ब्रान्डहरु को मात्र बारेमा छ किनभने यसको उत्पादन गर्न कुनै ध्यान, तपाईं, भुक्तानी छैन। म तिनीहरू वास्तवमा, व्यापक भएका छन् पछिल्लो समय जसबाट स्मार्टफोन को प्रदर्शन सुधार, बजार सीआईएस देशहरुमा र भारत, तर पनि युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिका दुवै जाने कि सहमत, तर तिनीहरूलाई बीच भेद गर्ने क्षमता गुमाए।
अन्य चिनियाँ उपकरणहरू भेद Thl W100 पनि हुनेछैन सजिलो - फोन, तिनीहरूलाई लागि क्लासिक डिजाइन मा डिजाइन गरिएको छ तल्लो मूल्य खण्ड गर्न attributable मान मा अवस्थित छ, र वास्तवमा कुनै पनि किसमिस छैन। यस मामला मा, स्मार्टफोन बारेमा उसलाई भेट्टाउन सकिएन छन् कि यसको मूल्य र गुणस्तर, साथै भरोसा समीक्षा को अनुपात मा आधारित, राम्रो भन्न सकिन्छ।
हामी थप ठीक एक मिसिन को प्रतिनिधित्व के हो बुझ्न क्रममा हाम्रो समीक्षा थाल्छन्।
स्मार्टफोन खरीद, तपाईं लेबल Thl W100 मूल सेतो बक्स आकर्षक प्राप्त, तर छैन। खोल्ने, यो मोडेल सबै दुनिया भर वास्तवमा मेल द्वारा शिपमेन्टहरू टाढा चीन देखि लागि अनुकूल छ कि स्पष्ट हुन्छ। यो कसरी बाक्लो गत्ता द्वारा प्रमाणित छ एक नरम सामाग्री संग भित्र मा टाँसियो र परिवहन फिलिम उपकरण नै enveloping। र फोन मा पर्यो छ कि संकेत समीक्षा, हामी ग्राहक यात्रा गर्न समय फेला पार्न सकेन।
पछि बक्समा Gaze खोल्ने नै अतिरिक्त सामान लागि क्षेत्र (बक्स) घर जो स्मार्टफोन, प्रस्तुत। यो दुई ब्याट्री, बिजुली आपूर्ति मोडेल, को हेडसेट समावेश छ। जसले उठाउँछ, तर यहाँ Thl W100 मार्गदर्शन गर्न अभिप्रेरित छन् अस्पष्ट छ कि छैन भनेर।
फोन समातेर, तपाईं थप विवरण आफ्नो शरीर को सबै सुविधाहरू देख्न सक्छौं। यसलाई जो तथापि, चिनियाँ चमकदार सतह कम लागत उपकरणहरू लागि एक मानक छैन एक क्लासिक डिजाइन, मा डिजाइन गरिएको छ। यस, यो सम्भव छ कारण, एकाइ आकर्षक देखिन्छ।
वक्ता, निकटता सेन्सर र प्रकाश, साथै अगाडि क्यामेरा - यहाँ नेभिगेसन माथिल्लो अगाडि भाग मा रूपमा सबैतिर एउटै छ। तल्लो क्षेत्र मा Thl W100 फोन भौतिक फिर्ता पछिल्तिर कुञ्जी वा "घर" र "विकल्प" बटन छ। तिनीहरूले पहिचान लागि सेतो उज्यालो छन्।
यस स्मार्टफोनको शीर्ष प्यानल पावर बटन शक्ति / अनलक स्क्रीन, साथै एक USB जडान र हेडफोन लागि आगत लागि कनेक्टर राखिएको छ। बायाँ तर्फ एक प्रमुख मात्रा नियन्त्रण छ।
पछाडि आवरण माटो या औंलाहरु नोटिस गाह्रो छ जो सेतो प्लास्टिक, बनेको छ; यहाँ क्यामेरा र फ्लैश लागि विन्डो छन्। राखिएको वक्ताले लागि स्लट को तल।
स्मार्टफोन Thl W100 (एक समयमा उपकरणहरू यो वर्ग मा धेरै लोकप्रिय थियो जो विकर्ण,) एक 4.5 इन्च स्क्रीन संग सुसज्जित। छवि घनत्व को 540 960 द्वारा पिक्सेल प्रति इन्च 240 पिक्सेल संकल्प कारण हो। को (कोण को परिवर्तन) खोल्दै छवि अलि हल्का देखिन्छ द्वारा। एक घमाइलो दिन काम सम्बन्ध, यस्तो अवस्थामा, केही प्रदर्शन यसको चमक हराउछ।
Thl W100 स्क्रिनमा5साथ नल सम्म समर्थन गर्दछ। यो बहु-स्पर्श एउटा सानो बजेट स्मार्टफोन लागि पर्याप्त हुनेछ।
तपाईं Thl W100 उपकरण विशेषताहरु को मार्क, मोडेल सुरुमा एन्ड्रोइड 4.2.1 संस्करण मा सेट थियो भन्ने विश्वास गर्छन् भने। आज, स्पष्ट, विकासकर्ता अद्यावधिक (संभवतः 4.2.2 सम्म), मोडेल (सफ्टवेयर को यो संस्करण सान्दर्भिक थियो समय मा) 2013 मा फिर्ता जारी थियो दिनुभयो। तथापि, पनि सम्भव Android को नयाँ संस्करण गर्न Thl W100 फ्लैश गर्ने बारे सोच्न। उपकरण र यसको आधारभूत परिमार्जन सफ्टवेयर ठीक कार्य गरिएको छ।
यो विकासकर्ताले मानक डिजाइन, यस ग्राफिकल प्रतीक परिवर्तन र तिनीहरूलाई थप रंगीन बनाउन गरेको उल्लेख गर्नुपर्छ। यो पनि यस्तो लक स्क्रिनमा स्थित छन् आवेदन रूपमा केही मोड्युलको तर्क स्तरवृद्धि गरिएको छ। अब, यन्त्र अनलक गर्न, प्रयोगकर्ता "क्यामेरा", "एसएमएस" वा "कल" पहुँच पाउन सक्छौं। यो विकास कम्पनी Thl छ।
साथै प्राविधिक भराई अघि - हृदय उपकरण, त्यसपछि हामी सुसज्जित MediaTek MTK 6589 संग उपकरण,4कोर मा सञ्चालन छ। को राम 4GB छ।
निस्सन्देह, यो "फलाम" प्रदर्शन आशा आवश्यक छैन - प्रत्येक कोर 1.2 GHz को घडी गति जारी गर्न सक्षम छ। तथापि, समर्पित Thl W100 समीक्षा द्वारा देखाइएको, फोन पनि सबैभन्दा भारी र रंगीन खेल, गुगल प्ले मा होस्ट को प्लेब्याक, कुनै पनि समस्या वा ढिलाइ बिना समर्थन - सबै सजिलै र सुन्दर जान्छ। यो आधारित, हामी सुरक्षित कम लागत बाबजुद Thl W100 स्मार्टफोन पूर्ण आधारभूत, दैनिक कार्यहरू संग, प्रयोगकर्ता सामना सामना गर्नेछ, भनेर भन्न सकिन्छ।
पहिले नै माथि भन्यो, फोन संचार स्काइप, Viber, र दृश्य संचार को अन्य साधन मार्फत क्यामेरा एक अगाडि छ। साथै, पाठ्यक्रम, त्यहाँ छ, र मुख्य क्यामेरा। उपकरण लागि आधिकारिक विनिर्देशों मा भने5र 8 मेगापिक्सेलको को म्याट्रिक्स संकल्प हो। छवि गुणस्तर द्वारा न्याय, यो कथन सत्य हो। तपाईं वस्तुहरु को मनोरम फोटो बनाउन भने, तिनीहरूले अलिकति "हल्ला" नोटिस हुनेछ, तर पाठ प्रदर्शन प्रसारण (सानो मुद्रण लेखिएको पनि) समस्या हुँदैन।
यो फोन दुई सिम-कार्ड संग साथ काम समर्थन घोषणा। किनभने, स्पष्ट, यो सम्भव दुई फरक नेटवर्क मा कुराकानी गर्न, यो (को संचालक को उचित चयन संग) कल को लागत कम बारेमा कुरा गर्न सम्भव छ जसद्वारा बनाउँछ यो धेरै सुविधाजनक छ। नेटवर्क सेटिङहरू अनुसार कार्ड को जो प्राथमिकता चुनिएको गरिनेछ तपाईं सक्दैन, निर्धारण गर्न। तपाईंले यसलाई अन्य तरिका के - पहिलो स्लट मा कार्ड सम्मिलित, यन्त्र मात्र यो3जी नेटवर्क मा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
फोन दुई कार्ड संग काम बाहेक पनि वाइफाइ-नेटवर्क मा काम समर्थन, क्षेत्र मा नेविगेशन लागि डाटा विनिमय, विकल्प, जीपीएस र एक जीपीएस लागि ब्लुटुथ-मोड्युल दावा।
समर्पित Thl W100 समीक्षा देखाउँछ, कुनै पनि उजुरी बिना कार्यहरु सबै काम।
धेरै प्रयोगकर्ताहरू लागि नम्बर एक कार्य - हामी सबै थाह छ, एन्ड्रोइड-उपकरणहरू जीवन विस्तार गर्न। समस्या यी ग्याजेटहरू राम्रो तिनीहरूले अधिकार भन्ने सुविधा सेट सबै प्रयोगको लागि किनभने मदत गर्दैन, अनुकूलित छैन पनि ठूलो ब्याट्री क्षमता छन् भन्ने छ।
सम्पर्क वर्णन उपकरण नै मा यो भन्न सकिन्छ - यो 1800 mAh ब्याट्री छ। मा सामान्य प्रयोग मोडमा 1-2 दिनको लागि काम फोन प्रदान गर्न सक्ने ब्याट्री यो औसत प्यारामिटर (5-6 घण्टा वा बढी सक्रिय सञ्चालन मा)। त्यसैले तपाईंले यो समस्या देखाउनुहुन्छ, केही उपाय लिन प्रयास गर्न भने आफ्नै छैन W100 केही उल्लेखनीय मोडेल स्मार्टफोन खाना को तत्व को "जीवन" विस्तार गर्न।
पनि फोन दुई ब्याट्री आपूर्ति संग भूल छैन - यो तपाईं पहिलो छुट्टी को मामला मा चार्ज ब्याट्री अरूलाई विस्थापन गर्न अनुमति दिन्छ।
किनभने इन्टरनेटमा समीक्षा धेरै बाँकी यसको अपेक्षाकृत उच्च लोकप्रियता को उपकरणको बारेमा। एक वास्तविक खुशी - ती सबैभन्दा मोडेल आफ्नो पैसा को योग्य छ, र यो काम गर्न भन्छन्। धेरै उपकरण एउटा ठूलो समारोह, स्थिरता र विश्वसनीयता, साथै गुणात्मक संकलित रूपमा छ लेख्नुहोस्।
निस्सन्देह, मानिसहरू कारखाना विवाह वा स्मार्टफोनको घटक को स्तर मा केही दोष सामना को नकारात्मक विशेषताहरु छन्। विशेष, गैर-काम बटन, वक्ता लेख्दै र आवेदन "क्यामेरा" प्रवेश गर्दा त्रुटि sizzling। यो भन्दा साधारण समस्या तीन विभाग भने गर्न सकिन्छ। तिनीहरूलाई लड्न तपाईं तरिका को एक किसिम आवश्यक: पहिलो दुई समस्या को घटना मा (, कुनै पनि व्यापक-प्रोफाइल सेवा केन्द्र हो सेवाको आधिकारिक बिन्दु कम्पनी हुनेछ सम्भवत गर्दैन रूपमा) फेला पार्न पूरा गर्न मरम्मत Thl W100 आफ्नो शहर जहाँ आवश्यक छ। निदान र दोषपूर्ण मोड्युल प्रतिस्थापन पकड सक्छ त्यहाँ।
प्रयोगकर्ता को विशेषताहरु रूपमा, एक आवेदन चलान गर्न नसक्नुको मा व्यक्त, कार्यक्रम स्तरमा समस्या अक्सर छ, सुटिङ लागि जिम्मेवार छ। सफ्टवेयर अद्यावधिक प्रक्रिया फोन वा अर्को परिमार्जन यसलाई प्रतिस्थापन - यो मामला मा तपाईं एक पुन फ्लैश बनाउन आवश्यक छ। तपाईं यस क्षेत्र मा एक विशेषज्ञ छैनन् भने, यो, सिफारिस गरिएको छ फेरि, फेरि, व्यावसायिक मद्दत लागि सेवा केन्द्र सम्पर्क गर्नुहोस्।
सामान्यतया, एक समीक्षा मा उल्लेख रूप मा, स्मार्टफोन मा malfunctions र त्रुटिहरू को संभावना एकदम ठूलो छ। मोडेल साँच्चै, असफल Thl W100 कसरी खोल्ने र एकाइ मर्मत गर्न केही स्वतन्त्र प्रयासहरू लिन को लागि, हेर्न छैन थाल्छ भने। सुरु गर्न, आफ्नो स्मार्टफोन रिबुट गर्ने प्रयास गर्नुहोस् - अभ्यास शो रूपमा, धेरै असफल यसरी हल गर्न सकिन्छ। केही परिवर्तन भएको छ भने मात्र, सेवा गर्न उपकरण ल्याउन।
पहिले W100 मोडेल धेरै समान सुप, इलेक्ट्रनिक्स स्टोर र त्यस्तो उत्पादन विशेषज्ञ मोबाइल फोन स्टोर को एक किसिम जस्तै, बिक्री मा थियो (यसको रिलिज लगत्तै)। साथै, यो (एक उचित मूल्य मा) र जहाँ उपकरण कुनै पनि देश संसारमा (नि: शुल्क ढुवानी पनि अक्सर) पठाईएको छ प्रमुख चिनियाँ लिलामी, प्राप्त गर्न सक्छ।
आज, एकाइ यसको सान्दर्भिकता हराएको बेला, मोबाइल फोन पसलहरुमा यो पत्ता लगाउन सक्षम छैन। निकास - एक प्रयोग स्मार्टफोन खरीद, प्रयोग, वा एउटै लिलामी, सौदागर बेचन स्टक उपकरणहरूमा debut मोडेल बाँया पछि जहाँ एक मोडेल आदेश। तर, यी साइटहरूलाई "hundredth" फेला पार्न पनि मा छैन त सरल छ - यसको ठाउँमा, नयाँ मोडेल आए विशेष, W200 र अरूलाई मा। यसलाई आफ्नो निर्माता यसको लाइन अद्यावधिक छ, र यो कारणले, सजिलो हुनेछैन कारण आफ्नो अप्रासंगिक बिक्री को लागि पुरानो प्रतिहरू पाउन स्पष्ट छ।
यो समीक्षा को समग्र परिणाम त unambiguous छैनन्। एक हात मा, हामी (पनि अन्तर्वेशन सँग, उत्पादक प्रोसेसर र क्यामेरा रूपमा) (एक सस्तो चमकदार प्लास्टिक बिना आईफोन संग समानता को कमी को कारण) एक केहि असामान्य उपस्थिति र एकदम कठोर विशेषताहरु छ जो एकदम राम्रो स्मार्टफोन, छ। माथिको गर्न साथै, उपकरण मा, त्यहाँ प्राविधिक उपकरण, जो ध्यान आकर्षित गर्न सक्छन् मामलामा अन्य बलियो अंक प्रशस्त छन्। निस्सन्देह, अधिक किफायती मूल्य एक Multifunctional ग्याजेट, यो मोबाइल उपकरणहरू को प्रशंसक को थोक अनुमति दिन सक्छ जो मार्फत रूपमा उल्लेख छैन।
अर्कोतर्फ, त्यहाँ केही नकारात्मक पक्षहरू छन्। पहिले, यो उपकरण को उच्चतम स्वतन्त्रता छ - छोटो अवधिको छुट्टी देखि भाग्न सकिँदैन कि त केही सुविधाहरू अप दिएर, वा अरू कारण अन्य, चार्ज (बाटोमा कतै हुनुको) गर्न प्रतिस्थापन ब्याट्री गर्न। साथै, प्रोत्साहन छैन र समीक्षा स्मार्टफोन एक विनिर्माण दोष, एक वा अन्य समारोह मा इन्कार को शुरुवात परिणाम जो प्रकट गरिएको छ भन्ने दाबी। यो प्रत्येक ग्राहक गर्न हुन सक्छ कि अर्को खराब कुरा हो। निस्सन्देह, दोष अन्य फोन मा उत्पन्न गर्न सक्छ - च्याम्पियन्स बीच सहित, तर एक पटक W100 मोडेल मा, तिनीहरूले विशिष्ट छन्, हामी विकासकर्ता को समस्या गर्न कमजोर स्थान उपकरणहरू र अपर्याप्त ध्यान कुरा गर्न सक्नुहुन्छ।
म यस फोन किन्न गर्नुपर्छ?
कार्यक्षमता वा स्थिरता - पहिलो चरण तपाईं यसलाई के गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने महसुस छ। यदि पूर्व, स्मार्ट फोन निश्चित यसलाई लायक छ लिनुहोस्: मोडेल साँच्चै एक किफायती मूल्य मा पूर्ण-fledged सार्वभौमिक ग्याजेट छ। तपाईं फोन को एक विश्वसनीय र स्थिर सञ्चालन रुचि राख्नुहुन्छ भने, शायद, यो मोडेल तपाईं अनुरूप छैन, र आफ्नो आँखा एक सिद्ध स्मार्टफोन भुक्तान गर्नुपर्छ। विकल्प तपाईंको हो!
को आईफोन4अनलक गर्न धेरै तरिका, यदि पासवर्ड बिर्सनुभयो
धेरै तरिकामा आफ्नो फोनबाट विज्ञापन कसरी हटाउने
कसरी "आईफोन 6" मा एमएमएस सक्षम बारेमा विवरण
स्मार्टफोन सोनी Xperia M4 एक्वा दोहोरो: वर्णन, सुविधा र समीक्षा
क्राइमन, वा पूर्वी, युद्ध
कसरी साइटमा घाँसबाट छुटकारा पाउनु हुन्छ? घाँटी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी तरिकाहरूको विवरण
क्षेत्रीय सकल उत्पादन: संरचना, मात्रा गणना
"5 किलो लागि एक हप्ताको लागि पातलो हुर्किसकेका छ" - यो वास्तविक हो कि?
डोरी पार्क सेन्ट पीटर्सबर्ग नजिकै "अखरोट"
प्रकाश घटना उदाहरण। प्रकृति मा प्रकाश घटना
हक्की खेलाडी Grettski Ueyn: जीवनी, खेल क्यारियर
एक्यूप्रेशर, यसको प्रयोग र contraindications